August 29, 2018 – CRM
Posted on August 29, 2018 Author swelsone	Comment(0)
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် လူများစုခေါင်းဆောင် Mitch McConnell မစ်ခ်ျ မက်ကောနယ်လ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက လူမဆန်ရက်စက်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြစ်တင်ပုံချခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အထက်လွှတ်တော်အမတ် မစ်ခ်ျ မက်ကောနယ်လ် က မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကို လူမဆန်သတ်ဖြတ်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မိမိ သံသယလုံးဝမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ မြန်မာ့စစ်တပ်ကို အဲဒီလိုလုပ်ရပ်တွေရပ်တန့်ဖို့ အမိန့်ပေးနိုင်စွမ်း တစ်စုံတရာမရှိတဲ့အတွက် တခြားသူတွေနည်းတူ သူမကို ဝိုင်းဝန်းအပြစ်တင်ဖို့ သူ့မှာဆန္ဒမရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ Source by : https://www.facebook.com/rfaburmese/photos/a.10150522560153128/10158053649483128/?type=3
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို အရေးယူရေး ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပြောကြား
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres အန်တိုနီယို ဂွတ်တားရက်ဇ် က ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ မြန်မာတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အစုအပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်မှုတွေနဲ့ အဲဒီလို လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေအတွက် တာဝန်ရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တခြား ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၅ ဦး ကို စွဲချက်တင်စစ်ဆေးရန် အကြံပေးချက်တွေကို အဖွဲဝင်နိုင်ငံတွေ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားကြဖို့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့ ၂၇ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ မြန်မာတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို “Genocidal intent” (ဂျနိုဆိုက်ဒယ် အင်တန့်) လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပေမယ့် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်က အဲဒီ စကားလုံးကို ရှောင်ကွင်းပြီး အစီရင်ခံစာမှာ […]
US leads calls for Myanmar military to be held to account for Rohingya crackdown
Several countries, including the United States, called Tuesday for Myanmar military leaders accused of orchestrating the repression of the country’s Rohingya minority to be brought before international justice. “The facts of the ethnic cleansing of the Rohingya must be said, and they must be heard,” said Nikki Haley, the US ambassador to the United Nations. […]
Haley says U.S. Rohingya report 'consistent' with U.N. findings
UNITED NATIONS (Reuters) – The findings ofaU.S. State Department investigation into Myanmar’s Rohingya crisis are “consistent” with those ofadamning report by U.N. investigators released this week that called for Myanmar officials to face genocide charges, the U.S. ambassador to the United Nations said on Tuesday. The U.N. report released on Monday […]
Posted on October 11, 2017 Author swelsone
Posted on August 1, 2018 Author swelsone